Matattoo—Bhaibheri Rinoti Chii Nezvawo? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Réunion Creole Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Urhobo Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Matattoo—Bhaibheri Rinoti Chii Nezvawo?
Bhaibheri rinotaura nezvematattoo kamwe chete pana Revhitiko 19:28, richiti: “Musazvitema nyora [matattoo].” Mwari akapa murayiro uyu kurudzi rwevaIsraeri, uye izvi zvaizovasiyanisa nemamwe marudzi akanga akavapoteredza aizvinyora-nyora pamuviri yavo mazita kana kuti mifananidzo yevanamwari vavo. (Dheuteronomio 14:2) Kunyange zvazvo vaKristu vasiri pasi poMutemo wakapiwa vaIsraeri, zvairehwa nemutemo uyu zvinokosha kuti tifunge nezvazvo.
MuKristu anofanira kuiswa tattoo here?
Mavhesi anotevera anogona kukubatsira pakuita chisarudzo:
‘Vakadzi ngavapfeke zvakanaka.’ (1 Timoti 2:9, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Zvinorehwa norugwaro urwu zvinoshandawo kuvanhurume. Tinofanira kuremekedza mafungiro evamwe torega kuita zvinhu zvokuti vanhu vanenge vachingotitarisa.
Vamwe vanoiswa matattoo vachida kuratidza kuti vanhu vorudzii kana kuti vachida kuratidza kuti hapana munhu anovaudza zvokuita nomuviri wavo. Asi Bhaibheri rinokurudzira vaKristu kuti: ‘Ipai miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene, chinogamuchirika kuna Mwari, iro basa dzvene nesimba renyu rokufunga.’ (VaRoma 12:1) Zvibvunze kuti sei ndichida kuiswa tattoo. Kana uchizviita nemhaka yokuti ndizvo zviri mufashoni kana kuti uchida kuratidza kuti uri wechikwata chakati, yeuka kuti unogona kuzochinja mafungiro ako asi tattoo hauzokwanisi kuibvisa. Kuongorora chinangwa chauri kuda kuisirwa tattoo kunogona kukubatsira kuti uite chisarudzo chakanaka.—Zvirevo 4:7.
“Zvirongwa zvomunhu anoshingaira zvinobatsira, asi munhu wose anokurumidzira zvinhu achashayiwa njere.” (Zvirevo 21:5) Munhu anogona kuiswa tattoo asina kumbonyatsofunga nepo zvichigona kuzomukanganisa muupenyu hwake kunyange pakuwana basa. Uye matattoo anogona kunge achidhura chaizvo uye achirwadza kuzoabvisa. Ongororo dzinoitwa uye kukura kuri kuita bhizimisi rokubvisa matattoo zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vanoiswa matattoo vanozozvidemba kuti dai vasina havo kuiswa.
Tsika Uye Mararamiro Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
Mwari Anoda Kuti Ndiitei Neupenyu Hwangu?
Unoda chiratidzo here kana kuti kurotswa kuti uzive kuti uzive zvinodiwa naMwari? Ona mhinduro yacho muBhaibheri.